Madaxweynaah Somaliya iyo R/waasraha oo maanta kulamo kala duwan ku qabtay Mogdisho.
Posted by admin on April 13 2011 14:04:24
Mogdisho:(hiranstate.com) Madaxweynaha Somaliya oo la kulamay xildhibanaada baalamaanka Somaliya, halka wasiirka 1aad shir jaraa'id kuu qabtay isla maanta magaalada Mogdisho.
Mogdisho:(hiranstate.com)- Dagaalkii Mogdisho ka socday maalmahani waxuu hada u wareegay mid siyaasadeed kaasi oo si toos ah ugu dhaxeeya qaramada midoobay iyo dowlada Somaliya.
Madaxweynaha Somaliya Shiikh Shariif.
Madaxweynaha Somaliya oo maanta la kulmay mudanayaasha baarlamaanka ayaa ku dhiiragaliyey sidii ay u ilaalin lahaayeen danta guud ee umada isagoo kula dar daarmay iney ka tigtoonadaan qatarta wadanka ku soo fool leh, waxuuna mudanayaasha qaarkood oo siyaasad ahaan ka soo horjeeda gudoomiyaha baarlamaanka Somaliya ku amaanay sida aysan shirka Kenya uga qeyb galin oo ay ugu nagaadeen dalkooda hooyo.
Marka laga soo tago kulanka madaxweynaha iyo mudanayasha baarlamaanka Somaliya dhax maray hadane waxaa jiray shir jaraa'id oo uu qabtay R/wasaaraha Somaliya kaasi oo uu ku celiyey go,aankiisii hore ee ahaa in qaramada midoobay ay u soo guurto gudaha wadanka. dabcan hadalkaasi Somalida damiirka leh aad ayey u jecleysan doonaan waayo dalka Kenya waxaa ka jira amaba ka furan in ka badan 500 oo xafiis oo midkasta la leeyahay dalka Somaliya ayuu gar gaaraa iyo xukumada Somaliya ayuu siyaasada kala taliyaa. hadaba xukumadii ay lahaayeen siyaasad ayaanu kala talinaa ayaa codsatay iney Mogdisho ka howl galaan maxey hada kedib qiil ka dhigi doonaan? waxaa kale oo iyaduna aad muhim ugu ah shacabka Somaliyeed iney ogaadaan dalkaan maalin kasta shacabkoodu ay gaajada u dhimanaayaan in kumanaan kun oo shaqaalo ajaanib ah oo dhibaatada iyo siyaasada Somaliya ka kar kariya dalkaasi Kenya iney u soo shaqo tageen oo hadii maanta nidaam iyo kala danbeyn loo helo dalka Somaliya ay shaqo la,aan ku dhaceyso sidaasi daraadeed hadalka R/wasaare Farmaajo waxuu noqon doonaa mid muhiimadiisa leh.
Wakiilka qaramada midoobay waxuu magaca Somaliya ku qaataa mushaar xad dhaaf ah waxaana u dheer diyaarado qaas ah iyo waliba safaro dheeri ah hadane meeshii ay madaxweynaha iyo xukumadii Somaliya ka howl galeysay waxuu leeyahay ma ahan meel nabad galyadeeda leysku haleyn karo, waayaabe sidey iyaga ku nool yahiin sow ciidamo African ah ma difaacaan ciidamadaasina sow isaga ma difaaci karaan?
Ugu yaraan xukumada Farmaajo hadii xitaa ay ku guuleysan weyso iney ka soo rarto dalka Kenya shaqaalaha qaramada midoobay waxey dalka Kenya ka codsan karaan in hay'addii aan ka howl galeyn gudaha Somaliya in aysan wakiil ka noqon karin magaca Somaliya kedibna waxaa jira xeer caalami ah oo wadanka magaciisa la isticmaalayo hadii xukumadiisu ay dalbato in wadankeeda laga shaqeeyo kedibna lagu gacan seyro waxey xaq u leetahay iney Xafiiska qaramada Midoobay ee New York iyo Geneva dhigaan waraaqo ay mowqifkooda ku cadeynayaan.waayo waxaa jira warbixino ku kooban Africa oo kaliya oo ay shaqaalaha UNka u gudbiyaan meelo cayiman oo inta badan waxyaabaha ay sameeyaan iyo go,aanka ay kaligood qaataan lagama oga xarumaha waaweyn ee qaramada midoobay sidaasi daraadeed wey sahlan tahay in arintaasi xukumada Farmaajo ku guuleysto hadii ay xoojiyaan madaxweynaha iyo mudanayasha baarlamaanka Somaliya.
Dalka Kenya sanadkii korontada ay isticmaalaan shaqaalaha UNka oo kaliya ayaa waxaa ka soo gala malaayiin dolar iska daa mushaarka la siinayo shaqaalaha Kenyatiga ah. waxaa kale oo dalka Kenya ka jira in aysan ka shaqeyn karin hay'add aan 50% shalheeda ka dhigeyn muwaadiniinta u dhalatay dalka Kenya iyagoo og in mashruuca loogu talo galay dalka Somaliya.
Dadaalka ay ugu jirto xukumada Farmaajo iney qaramada midoobay u soo guurto gudaha wadanka oo ay ugu horeyso caasimada Somaliya ee Mogdisho waa mid ka mid ah culeysyada siyaasadeed ee shacabka Somaliyeed heysta maanta, hadii lagu guuleystana waxaa shaqo iyo nolol ka heli doonaa kumanaan shacabka Somaliyeed ka mid ah oo iyagu intii ay ku dhiiran lahaayeen dagaalka u weecin lahaa iney bartaan dhawr xafar oo English ah oo ay hayadaha gar gaarka kaka shaqeystaan.